फोटो बिवाद : साम्राज्ञीलाई नाे टेन्सन! थप नयाँ फाेटाे सार्वजनिक – Daunne News
फोटो बिवाद : साम्राज्ञीलाई नाे टेन्सन! थप नयाँ फाेटाे सार्वजनिक
By Daunne News	 On श्रावण ५, २३:४३
नेपाली सिनेमा क्षेत्रकी लोकप्रिय अनि महंगी नायिका हुन साम्राज्ञी राज्इ लक्ष्मी शाह । कम समयमा उनले पाएको नेम र फेमबाट नव आगन्तुक नायिकाहरु पनि लोभिने गर्छन् । उनले अभिनय गरेका प्राय फिल्महरु सफल छन् । तर पनि फिल्म भन्दा बढि प्रेम सम्बन्धको कारण चर्चा र बिवादमा आउँने साम्राज्ञीको केही दिन सार्वजनिक भएको आपत्तिजनक तस्बिरहरुले सिनेमा बजार निकै ततायो । सामाजिक सञ्जामा ती आपत्तिजनक तस्बिरहरु बाहिरिएपछि धेरैले उनलाई गाली गरे ।
कुनै समय व्यवसायी मयंक खड्कासंग प्रेम सम्बन्धमा रहेकी उनी यतिबेला देवाङ्कस राणासंग प्रेम सम्बन्धमा रहेकीछिन् । हाल उनीहरु छुट्ट मनाउँन इन्डोनेशियाको बाली पुगेका छन् । जहाँका तस्बिरहरुले हंगामा नै मच्चियो । साम्राज्ञी निकै ट्रोल समेत बनिन् तर यसले उनलाई कुनै फरक पारेको छैन । नितान्त व्यक्तिगत जीवन बिताउँन चाहाने साम्राज्ञीले बालीका केही नयाँ तस्बिरहरु पनि पोस्ट गरेकीछिन् ।
जहाँ उनी प्रेमीसंगै देखिएकीछिन् त्यो पनि खुसी खुसी । साम्राज्ञीको आपत्तिजनक तस्बिरहरु सार्वजनिक हुँदा उनलाई त गाली गरे गरे कतिपयले उनको परिवारलाई समेत मुछे । तर पनि साम्राज्ञीलाई यी सब कुराहरुले प्रभाव पारेको जस्तो देखिँदैन । त्यसैले सायद हिन्दीमा भनिएको छ कुछ तो लोग कहंगे , लोगका काम हैँ केहेना । कतै साम्राज्ञीले पनि यही सोचेकी त होईनन् ?
संगीताको तीज गीत ‘मै घुमें फनफनी’ सार्वजनिक
रनवीर सिंहको भाइरल फोटोसुट
अन्जु र मनोजराज सिवाकोटीको नयाँ गीत ‘तिमी आयौं जिन्दगीमा’ सार्वजनिक
शिव र रचनाको नयाँ गीत ‘सुनको चन्द्रमा’